भगवान रामको जन्मबारे यस्तो छ वैज्ञानिक तथ्य – live 60media
भगवान रामको जन्मबारे यस्तो छ वैज्ञानिक तथ्य
रामको जन्म त्रेता युगमा भएको थियो । आदिकाब्य बाल्मीकीय रामायणमा रामको जन्मको बारेमा निम्नलिखित वर्णन गरिएको छ ।
चैत्र महिना नवमी तिथी, पुर्नवर्सु नक्षत्रमा, पाँच ग्रह उच्च स्थानमा परेको तथा कर्कट लग्न चन्द्रमासँगै बृहस्पति स्थिर भएको समयमा रामको जन्म भएको हो । रामको जन्म त्रेता युगको अन्तिम समयमा भएको थियो । वाल्मीकिमा लेखिएको छ । देवता तथा ऋषिलाई दुःख दिने क्रुर राक्षसको नाशको लागि पृथ्वीका रक्षा गरेर श्रीराम मनुस्य लोकमा ११ हजार वर्ष सम्म बसे ।
वैदिक धर्म अनुसार एक निर्धारित सख्याको वर्ष कालावधि हो । ब्रम्हण्डको काल चक्र चार युगपछि दोहोरिन्छ । जसमा चार युग हुन्छ ।
कलियुगः ४ लाख ३२ हजार मानव वर्षको हुन्छ । अहिले पनि द्धापर युग हो । द्धापर युग ८ लाख ६४ हजार मानव वर्षको हुन्छ जब कृष्ण संसारबाट बिदा भएपछि कलियुग प्रारम्भ भएको हो । आज भन्दा लगभग ५१ सय वर्ष पहिले कृष्ण प्रस्थान गरेका थिए र जब राम संसारबाट बिदा भएपछि द्वापर युगको सुरुवात भएको हो ।
द्धापर युग ८ लाख ६४ हजार वर्षको हुन्छ । रामको जन्म त्रेता युगमा वा द्वापर युग भन्दा पहिले भएको थियो । राम ११ हजार वर्ष मनुस्यको रुपमा धर्तीमा बसे । अहिले कलियुगको पनि ५१ सय वर्ष बितिसकेको छ । द्धापर युग, राम बसेको वर्ष र द्धापर युगको अन्तपछि आजसम्मलाई जोड्दा र वेदको ज्ञान अनुसार रामको जन्म ८ लाख ८० हजार १ सय वर्ष पहिले भएको हो । धार्मिक ग्रन्थको सहयोगमा
← रक्सी नपाएपछि अल्कोहल भएको सेनिटाइजर पिउँदा १० जनाको मृत्यु !
अशोक दर्जीकी फुपू र बुबा मध्यरातमा रुँदै मिडियामा, आखिर के भयो ? →